Tutan Dr. Sasa Bia Cu A Mak Ko. Ralhrang Bawi Min Aung Hliang Le Suu Kyi Kongah A Chimmi Si. - Chin Eleven News
Tutan Dr. Sasa Bia Cu A Mak Ko. Ralhrang Bawi Min Aung Hliang Le Suu Kyi Kongah A Chimmi Si.
Aung San Suu Kyi le Min Aung Hliang cu July 15, 2021 ah ton biaruahnak an ngei timi thawngpangaum hnu ah, Dr. Sasa zong bia halnak hun tuahasi ve. Bia halnak an tuah mi cu “Aung San Suu Kyi le Min Aung Hliang hi i tong taktak hna sehlaw, tutan kan theih mi thawngpang hiadik mi si taktak sual sehlaw nan mah NUG lei nih zeitin dah nan ruah tiah an hal hi asi.
Dr. Sasa nih lehnakatuah mi cu: Ram mipi thinlung ah hmunhmaangei ti lomi, Uknak zong la kho loinasung cang ko mi Min Aung Hliang he ton biaruahnak ding sullam pakhat hmanhaum lo. Tutan rampi buainak, mithah Lainawnnak vialte zoh tikah Kawlram chung ah tihnung le tuksapur cemasimi Lainawn nak si. Cu caahamah he tonnak ngeih le biaruahnak ngeihnak ding sullam pakhat hmanhaum ti lo” tiahachim.
Cun Dr. Sasa nihataanglei bantuk hinabiaapeh rih. Zeiruang ahdah Min Aung Hliang he cun ton biaruahnak ngeihaherh, Zeikong dahamah he ceih ding cuaum ti, Zeitin hmanh in kan cohlang kho lai lo, ton biaruahnak ngeihpi awkatha tilo mi asi”ati.
Min Aung Hliang nih hriamnam thazaang hmang in ram mipi tamtuk an kan thah nawn, cun Covid pulrai hmang in Ralkap nih ram mipi tamtuk an kan thah nawn cang. Cu caah Suu Kyi nih Min Aung Hliangaton cu ka zum lo. Ton biaruahnakangeih pi timi thawngpang hi ka zum lem lo.
Nain ruah ding pakhat cuaum kho ve thiam. Cucu zeidahasi ti ahcun Aung San Suu Kyi cu inn thong ah hrenasi, lenglei pehtlaihnak zeihmanh theihter loasi ialeng lei he pehtlaihnak an chah piak dih cang. Cu caah ramchung ah zeidahacang taktak timi, mipi an kan thah nawnnak vialte hi fiang ko inahmu lo kho men, ram mipi temhtuarnak, thisen luannak vialte hiatheih lo zongasi kho. A theih lo buin Min Aung Hliangaton sual hmanh ah kan mah lei nih cun zeitin hmanh in kan cohlang lai lo tiah Dr. Sasa nih cun fiang ko inachim fawn.
Cunachimchap rih mi cu “Aung San Suu Kyi cu mitha, mifel, dawtnak le zawnruahnak inakhat miasi. Cuathinlung thatnak cu ralkaap nih caantha ah an i lak hiatlawm ti lo. Suu Kyi thinlung thatnak, dawtnakangeihnak vialte hi kum tampi caantha laknak ah ralkap nih an rak hman zungzal mi asi. Fiang ko in chim ko ahcun, Keimah Dr. Sasa hi Aung San Suu Kyi tluk in thinlung ruahnak kauangei mi ka si lo. Thinlung ruahnak lei ah ka tluk ve hrimhrim lo. A si nain mithat Lainawng pawl cung ah thinlung ruahnak kau pi va ngeih peng zong hialak menasi ko” tiahachim fawn.
Kawlca relchih dingmi: မင်းအောင်လိူင်က အမေစုကို တကယ် ဆွေးနွေးခဲ့ရင် ဘယ်လိုဖြစ် လာမလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ဒေါက်တာဆာဆာ အခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။
ကျရူံးနေပြီဖြစ်တဲ့ မိအောင်လိူင် အုပ်စုနှင့် ဒီအချိန်မှာ ဆွေးနွေးစရာဘာအကြောင်းပြချက်မှ မရှိတော့ပါ။
ဒါကြီးက လုံးဝ လုံးဝ ဆွေးနွေးစရာအကြောင်းမရှိတဲ့ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ အရက်စက်ဆုံးအကြမ်းတမ်းဆုံး လုပ်ပြနေကြပြီးပြီလေ…
နောက်တစ်ခုက ဘာကိုဆွေးနွေးမှာလဲ ? ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ လက်ခံတော့မည်မဟုတ်ပါ။
အကြမ်းဖက်အုပ်စုက အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ လက်နက်အားကိုးနှင့် ရာပေါင်းများစွာ ပေါ်ပေါ်တင်တင်သတ်ပြတယ် ၊ဒါကို အားမရလို့ ကိုဗစ်ရောဂါနှင့် ပြည်သူတွေ ထပ်သတ်တယ်။ အမေစုကလည် ဆွေးနွေးမယ်မထင်ဘူး။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်။
အမေစုကတော့ တကယ့်မြေပြင်ပေါ်က အဖြစ်ပြတ်တွေ မသိနိူင်လောက်ဘူး။ မြေပြင်ပေါ်က အကြမ်းဖက်အုပ်စု ရက်စက်မူတွေမသိပဲ ဆွေးနွေးမိလာခဲ့ရင်တောင် ကျွန်တော်တို့ဘက်က လက်ခံနိူင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အမေစုက မေတ္တာတရားနဲ့ အုပ်ချုပ်ချင်နေတာကို ဒီအကြမ်းဖက် မိအောင်လိူင်တို့ အုပ်စုက အခွင့်ကောင်းယူ လှည့်ဖြားနေတာကြာပြီ နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူး။
ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကျွန်တော် ဆာဆာက အမေစုလောက် သဘောထားမကြီးနိူင်ဘူး။ အမေစုလောက် မေတ္တာတရားမရှိနိူင်ဘူး။ ဒီလို ရက်စက် ကြမ်းကျုတ်တဲ့ အကြမ်းဖက် စစ်အုပ်စုကို မေတ္တာထားလည်အပိုပါပဲ။ ပြည်သူတွေပဲ ထိခိုက်နစ်နာတယ်။ ဒီအချိန်မှာ လူစိတ်မရှိတဲ့ အကြမ်းဖက်လူသတ်သမား မိအောင်လိူင်တို့ ကို မေတ္တာထားရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူး။ထောင်ထဲမှာထားရမယ့်အချိန်ဖြစ်သွားပြီ သူတို့ ကျူးလွန်တဲ့ ပြစ်မူတွေအတွက် ထောင်ထဲမှာ ပေးကိုပေးဆပ်ရမယ်။
သူတို့ အကြာင်းမဲ့ သတ်ခဲ့တဲ့ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ ရာပေါင်းများစွာက အသက်ပြန်ရှင်လို့မရတော့ဘူး။ လူအရွယ်အစားအမျိုးစုံပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမေစုနှင့် ဆွေးနွေးသည်ဖြစ်စေ၊ မဆွေးနွေးသည်ဖြစ်စေ အရေးမကြီးပါဘူး။ အရေးကြီးတာက စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အပြီးတိုင် ချုပ်ငြိမ်းရေး ၊အာဏာရှင်စနစ် အမြစ်ပြတ်ဖြတ်ချရေးက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကလည် လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်သွားမည်။ မိအောင်လိူင်တို့ အုပ်စု ရှိနေသ၍ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ အသတ်ခံရအုံးမှာပဲ၊ အနိပ့်စက်ခံရအုံးမှာပဲ၊ အနိုင်ကျင့်ခံရအုံးမှာပဲ ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရအုံးမှာပဲ လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်နေအုံးမှာပဲ၊ စစ်ရာဇာဝတ်မူ ကျူးလွန်အုံးမှာပဲ။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဘက်က နောက်ပြန်လှည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူး၊ သေချာတာ တစ်ခုကတော့ မိအောင်လိူင်တို့ ကျရူံးနေပြီ။ အရေးတော်ပုံမုချအောင်တော့မည်။
အားတင်းထားပါ မြန်မာပြည်သူလူထုကြီး မြန်မာပြည်သူအားလုံး Covid-19 ဘေးနှင့် အကြမ်းဖက်မူဘေးကနေ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
Tutan Chin Pasaltha CDF Nih Ca An Chuahmi Cu Ralhrang Caah Thinphang Si Cang Hih!
Pasaltha CNO/CNDF Nih Ralrin Peknak Cathanh An Chuah Than Cang!